Olana famantarana famantarana 7 + fomba 11 hialana amin'izy ireo - Fifandraisana
Te ho afaka matokia indray ? Ity no $ 14.95 tsara indrindra laninao.
Saika momba antsika rehetra dia hamadika ny fitokisantsika amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika.
Mety ho eo am-pelatanan'ny a namana mpamitaka , namana iray izay mizara tsiambaratelo nilaza tamin'izy ireo tamim-pahatokian-tena, mpitsabo matihanina izay manimba fa tsy manasitrana, na ray aman-dreny mampijaly na manambany antsika fa tsy manamarina na mamporisika antsika.
Mety ho ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo.
Isaky ny hamadihana ny fahatokisana dia misy fahasimbana kely atao amintsika ao anatin'ny foton'ny fiainantsika.
Ary rehefa tapaka ny fahatokisana imbetsaka nandritra ny taona maro, dia mety ho sarotra be ny tena matoky olona indray, amin'ny endrika fifandraisana rehetra.
Ity lahatsoratra ity dia hizaha ny atao hoe fifampitokisana, ny fomban'ny olan'ny fitokisana, ireo famantarana fa sahirana ny olona matoky azy, ary ny fomba hialana amin'ny olana momba ny fitokisana.
Inona no atao hoe fahatokiana?
Mba hahatakarana ny dikan'ny hoe manana olana misy fahatokisana, dia mila mamaritra aloha ny atao hoe fahatokiana.
Ity misy fanazavana tsotra:
Ny fahatokisana dia ny finoana fa ny olona, ​​ny vondrona na ny andrim-panjakana dia hanao zavatra mihevitra ny fahatsapanao, ny fanirianao ary ny tombontsoanao indrindra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fahatokisana dia fanantenana fa hisy olona hanao zavatra araka izay itiavanao azy.
Ny fifampitokisana dia misy amin'ny fifanarahana ara-tsosialy lehibe sy kely ataontsika amin'ny hafa.
Rehefa matoky ny vadinao ho mahatoky ianao dia mino ianao fa hitondra tena tsara amin'ny fomba maneho ny tsy fivadihany aminao izy ireo.
Toy izany koa, rehefa mandamina fihaonana amin'ny namanao ho an'ny kafe ianao dia mino (izany hoe matoky ianao) fa ho tonga ara-potoana izy ireo.
Famakiana fahatokisana mitranga rehefa misy olona manao zavatra tsy miraharaha ny fihetseham-ponao, ny fanirianao ary ny tombontsoanao manokana.
Ary ny fahatsapanao, ny fanirianao ary ny zavatra mahasoa anao indrindra dia mifandray.
Ohatra, raha miverina amin'ny fifanarahana am-bava ny lehibenao mba hanomezana anao fiakarana karama dia mety hiteny ianao fa ny famadihana voalohany dia ny nanohitra ny anao firariana
Saingy tapaka ihany koa ny fahatokisana satria ny lehibenao dia nanao zavatra na dia teo aza izany fihetseham-po mety hiaina ny toe-javatra ianao, ary satria ny anao tombontsoa tena tsara tsy noraharahaina.
Ahoana ny endrika isehoan'ny fitokisana?
Ny olona iray dia mety ho tonga sahirana amin'ny fahatokisana ny hafa noho ny traikefa niverimberina izay namadihana ny fitokisany.
Ny fitaizan'olona iray dia afaka mitana andraikitra. Raha toa ka zaza ny olona iray dia iharan'ny herisetra ara-batana na ara-pihetseham-po, dia mety hitombo izy ireo ka hino fa ny fahatokisana dia foto-kevitra diso.
Rehefa dinihina tokoa, raha tsy nahatoky ny ray aman-dreniny, ny mpikarakara voalohany, na ny havany akaiky izy ireo, maninona no hinoany fa azo atokisana ny hafa?
Ny fifandraisana misy poizina na fisakaizana maharitra dia mety hitarika amin'ny famoronana olana ara-pitokisana koa.
Ny fanaovana herisetra, na amin'ny ankizy na amin'ny lehibe, dia mety hialoha lalana amin'ny tsy fahatokisana tanteraka ny hafa.
Ary, indraindray, ny famadihana tokana dia mety hiteraka olana amin'ny fifampitokisana amin'ny toe-javatra mitovy - oh. ny olona iray voafitaka amin'ny fiarahana dia mety ho sarotra aminy ny matoky ireo ho avy amam-pitiavana ho avy nefa tsy manana olana amin'ny fahatokisana namana, mpianakavy ary mpiara-miasa.
Olana famantarana famantarana 7
Inona avy ireo famantarana ara-tsaina, ara-pihetseham-po ary azo ampiharina fa manana olana amin'ny fahatokisana ny hafa ny olona iray?
1. Mitsikilo olona ianao (satria tsy mino azy ireo ianao)
Raha efa nandainga be dia be ataon'ny olona maro samihafa, inoana fa tsy manam-pinoana betsaka amin'ny zavatra lazain'ny olona aminao ianao.
Raha mahafantatra olona vaovao ianao ary lazainy aminao ny antsipiriany sasany momba ny fiainany, ny valinteninao dia mety hanao fandavahana kely hahitana raha milaza ny marina izy ireo.
Angamba ianao manamarina ny mombamomba azy LinkedIn hanamarinana ny tantaran'ny asany / fanabeazana, na mandalo ny sarin'izy ireo amin'ny media sosialy, mitady famantarana ny famitahana.
Izany dia heverina ho ara-dalàna amin'izao vanim-potoana hafahafa an-tserasera izao raha ny fikarakarana ny fiadananao manokana.
Rehefa lasa hafahafa ny raharaha dia rehefa efa niaraka tamin'ny olona kelikely ianao, nefa mbola mahatsapa fa ilaina ny manara-maso azy ireo tsy tapaka.
Raha milaza izy ireo fa miaraka amin'ny namany dia mandefa hafatra amin'ny namany izy ireo raha hahitana raha marina izany.
Azonao atao aza ny mangataka porofo ara-tsary hoe any amin'ny toerana itenenan'izy ireo izy ireo, manao izay lazainy fa ataony.
2. Manantena ny hamela anao hiala izy ireo
Na tsy tonga tamin'ny resa-bokinao ny ray aman-dreninao, tsy naka ny ankizy ny olon-tianao rehefa tsy tara ianao, na tsy nisarika ny lanjan'izy ireo ny mpiara-miasa aminao amin'ny tetikasa iray, fantatrao fa hamela midina ianao, indrindra rehefa tena mila azy ireo ianao.
Araka izany, mirona handray andraikitra isan-karazany ianao: tsy mahatoky olon-kafa ianao raha manao izany.
Izany dia mety hiteraka fahatsapana fa reraka sy reraka tsy tapaka ianao satria mitondra mihoatra lavitra noho ny adidinao manokana, noho ny tahotra sao tsy hokarakaraina ny raharaha raha tsy ataonao ny tenanao.
Ankoatry ny mandreraka anao, miaina miaraka amin'ny fahatsapana fa 'raha mila zavatra atao ianao, dia mila ataonao izany' dia mety hiafara amin'ny fahatsapanao lolompo amin'ireo manodidina anao.
Mety hahatsapa ianao fa terena ho superman / superwoman satria tsy hisy olon-kafa hiakatra sy handray ireo asa ireo.
3. Manararaotra ny toe-javatra iainanao mba hanamafisana ny finoanao
Faminaniana manatanteraka tena (SFP) dia mahafinaritra tokoa, sa tsy izany?
Toy ny, manantitrantitra fa tsy misy dikany ny miditra anaty fifandraisana amin'ny olona iray satria hiafara amin'ny fandaozany anao fotsiny izy ireo.
Avy eo mampihoron-koditra amin'ilay olona voalaza mandrakariva mba hitsapana hoe hatraiza ny zak'izy ireo raha tena tianao sy tena izy ireo.
Ary avy eo dia 'OMG NITENENO ANAO IANAO MBOLA NAMELA' rehefa tonga any amin'ny teboka tapaka izy ireo satria natosinao izy ireo.
Ny olona dia mazàna mamorona an'ireto SFP ireto ho toy ny rafitra fiarovana mba tsy haratra.
Matetika izy ireo matahotra be sao ho voafitaky ny olona avelany hikarakara azy ireo ka minia mamorona toe-javatra izay hitranga ilay zavatra atahorany mihitsy.
Manamarina ny fihetsik'izy ireo izany rehefa miziriziry manery ny hafa hanalavitra na hisoroka karazana rehetra firaisana ara-nofo .
4. Misaintsaina ianao - Ary ratsy foana
Na manao ahoana na manao ahoana zava-misy na tsia, tsy azonao atao ny mieritreritra fa tapaka ny fahatokisanao amin'ny fomba rehetra azo atao.
Manana opera savony na sarimihetsika mitohy ao an-tsainao ianao izay misy ireo ‘endri-tsoratra’ amin'ny fiainanao manao zavatra handratra anao.
Ary na dia ao an-tsainao aza izany, dia mandeha ra ao anaty eritreritra, fahatsapana ary fitondran-tena amin'ny fiainanao tena izy.
Angamba mahita sarin'ny namanao akaiky indrindra roa miaraka amin'ny media sosialy ianao, ary manomboka mamorona tantara avy hatrany ny sainao momba ny antony tsy nanasana anao.
Tsy dia tia anao ry zareo, mody namanao fotsiny izy ireo noho ny fangoraham-po, na mampiasa anao rehefa sahaza azy ireo.
Ary noho izany, na dia misy antony marim-pototra zero mihitsy aza hahatonga azy ireo hihaona tsy misy anao, dia mino tanteraka ianao izao fa misy izany.
Ny fahatokisanao an'ireo namana ireo dia simba kely ary mety hanomboka ny iray amin'ireo faminaniana manatanteraka tena voalaza etsy ambony ianao.
5. Mino ianao fa tsy mendrika fahasambarana
Anisan'ny tsy fahatokisana ny hafa ny finoana fa tsy mendrika ny hahasambatra ianao.
Ary, amin'ny fanitarana, tsy mendrika ny ho voatsabo tsara ianao.
Ny fahatokisan-tena ambany sy ny fiheveran-tena dia matetika no mitranga noho ny antony mitovy amin'ny olan'ny fifampitokisana.
Ratsy fitondran-tena anao ny olona ary manimba ny fahaizanao matoky izany ary mahatonga anao hino fa tsy maintsy mendrika izany ianao.
Ary tadidio fa ny fifampitokisana dia misy olon-kafa mihevitra ny fihetseham-ponao, ny fanirianao ary ny tombontsoanao manokana. Fa raha tsy mino ianao fa mendrika fitsaboana ara-drariny, maninona no hatoky ny hafa handinika ny iray amin'ireo zavatra ireo ianao?
6. Tazoninao ho takona ny eritreritrao sy ny fahatsapanao
Ny ampahany aminao izay tsy hitan'ny hafa - ny eritreritra sy ny fahatsapana milomano manodidina ny sainao - dia takona tsara.
Ho anao, azo antoka kokoa ny tsy manambara be loatra ny tenanao, fa miambina hatrany.
Manana tombony roa lehibe io raha ny fahitanao azy.
Voalohany, amin'ny alàlan'ny fihazonana elanelam-pihetseham-po eo anelanelanao sy ny olon-kafa, dia mametra ny ratra mahazo anao ianao rehefa mamadika anao tokoa izy ireo.
Ary, faharoa, tsy manome fampahalalana amin'olona ianao fa azon'izy ireo ampiasaina avy eo hampiadiana anao.
7. Mahatsiaro ho manirery ianao ary mitokana
Ilaina ny fifampatokisana mba hamoronana fifandraisana lalina sy feno fitiavana. Satria tsy afaka maneho fahatokiana ianao dia mijanona ho maditra hatrany ny fifandraisana amin'ny fiainanao.
Tsy mahatsapa fifamatorana matanjaka indrindra amin'ny maro ianao - na misy aza - olona ary ny vokany dia fahatsapana ho manirery.
Na dia betsaka aza ny olona amin'ny fiainanao dia mahatsiaro tsy mifandray aminy ianao. Mijanona ho lavitra ianao, tsy vonona ny hamela ny fiambenana anao sy ny olona hiditra.
Ahoana ny fatokisanao ny tenanao: 20 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Famantarana 20 misy olona manana olana momba ny fandaozana
Ahoana no hiatrehana rehefa misy manambaka anao
Torohevitra 11 hialana amin'ny olan'ny fitokisana
Raha mieritreritra ianao na mahalala fa manana olana manodidina ny fifampitokisana, inona no azonao atao amin'izany?
Ahoana no ahafahanao mandresy azy ireo ary hatoky ny olona indray?
Ireo torohevitra ireo dia tena afaka manampy, indrindra rehefa ampiasaina miaraka.
1. Ianaro ny fomba ahazoana ny fahatokisana / omena
Ny fahatokisana dia tsy zavatra tokony homenao an-jambany. Tokony hahazoana izany.
Ny iray amin'ireo lakilen'ny fandresena ny olana amin'ny fahatokisana dia ny fahafantarana hoe oviana ary nahoana no kely ny fitokisana azon'ny olona iray.
Tokony hamantatra ireo tranga nanehoan'ny olona toetra tsara azo itokisana ianao.
Amin'ny fanekena isaky ny misy zavatra ataon'ny olona hahazoana itokisanao dia manova ny hevitrao momba an'io olona io ianao.
Ny hevitra efa noeritreretinao momba ny tsy fahatokisana olona iray dia toherina hatrany mandra-pahatongan'ny fahatokisana handresy ny tsy fahatokisana.
2. Diniho manokana ny olona na ny orinasa
Ny olona manana olana amin'ny fifampitokisana dia matetika mandoko ny olon-drehetra sy ny zavatra rehetra miaraka amin'ny borosy iray ihany.
Midika izany fa raha misy olona manao zavatra (na efa nanao zavatra) hamadihana ny fitokisanao dia manimba ny fijerinao ny olon-kafa rehetra izany.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny hitondrana mitokana ny olona na ny fikambanana tsirairay.
Omeo ‘kaonty’ ao an-tsainao ny olona tsirairay amin'izay itokisanao azy.
Toy ny tamin'ny teboka teo aloha, ampio ny fifandanjan'ny fitokisan'ny olona isaky ny mampiseho izy ireo fa azo atokisana.
Raha misy mamadika ny fitokisanao, manafoana na mampihena ny kaontin'io olona io, ihany azy ireo. Ataovy tsy miova ny kaonty hafa.
Toy izany koa, raha nisy olona tamin'ny lasa nanitsakitsaka fampanantenany na namadika anao tamin'ny fomba hafa dia aza mieritreritra fa hanao toy izany koa ny olona amin'ny ankehitriny na ho avy.
Izy io dia mifandraika indrindra amin'ny fifandraisana am-pitiavana izay nandratra anao taloha.
Aza manasazy ireo mpiara-miasa ankehitriny na ho avy noho ny heloka vitanao taminao taloha. Samy hafa tanteraka izy ireo.
3. Miorena amin'ny porofo fa tsy Fantasy
Tadidinao ny teboka tao amin'ny fizarana teo aloha momba ny fisainana diso tafahoatra?
Tokony hiezaka ianao tsy hamela ny tantara an-tsehatra fanta-daza izay milalao ao an-dohanao hitaona ny fahatokisanao sy ny finoanao ny olona iray.
Raha manana porofo marina ianao fa mametraka fisalasalana amin'ny maha-azo itokiana azy ireo dia azonao atao ny manatanteraka izany.
Fa raha ny fiahiahanao miorina amin'ny zavatra hafa ankoatry ny eritreritrao dia mila manohitra izany ianao.
Miverina any amin'ny teboka # 1 sy # 2 izany ary ny fomba tokony hamantaranao ireo zavatra izay mampiseho fa azo atokisana ny olona iray ary miorina amin'ireo zavatra ireo irery ny fahatokisanao azy.
4. Mianara Aza mamolavola ny tsy fitokisanao amin'ny hafa
Sarotra aminao angamba ny mitoky amin'ny olon-kafa satria tsy matoky ny tenanao ianao.
Angamba tsy mahita ny tenanao ho olona mendri-pitokisana ianao.
Amin'ity tranga ity dia mety ho mora ny mamolavola ny finoanao fa tsy azo atokisana amin'ireo manodidina anao ianao.
Miverina amin'ny eritreritrao be loatra io. Raha manontany tena ianao hoe ahoana no hataonao amin'ny toe-javatra iray dia afaka mieritreritra mora foana ianao fa misy olona iray mampametra-panontaniana ihany.
Izany dia mifandraika indrindra amin'ireo olona mandainga na manambaka ary avy eo mahita fa sarotra ny matoky ny hafa. Mino fotsiny izy ireo fa raha mahavita manao zavatra toy izany izy ireo, dia olon-kafa koa.
5. Fantaro ary hamafiso ny toe-javatra mahatonga ny tsy fahatokisana
Hitanao ve fa ny olana atokisanao dia lasa olana lehibe fotsiny amin'ny toe-javatra sasany?
Angamba tsy eo am-pandraharahana ny vadinao. Na angamba nolavin'ny namanao ny fanasana hihaona.
Zava-dehibe ny mamantatra ireo toe-javatra ireo na hafa izay mampihemotra ny fanairana fahatokisana anao.
Raha fantatrao ny fotoana mety hitrangan'ny tsy fahatokisana, dia afaka mahita fomba hanamorana izany ianao.
Ny fomba tsara indrindra dia ny manelingelina ny tenanao amin'ny zavatra hafa izay afaka mampifantoka tanteraka ny sainao.
Raha sahirana ianao mieritreritra zavatra ataonao, dia tsy hanana fotoana hiahiahy ianao sao misy mamadika anao ny olona iray.
Hisorahanao tsara ny fisainanao izany tsy handroboana satria ny sainao dia lasa any an-kafa.
6. Manàna finoana ny olona - Fa manomboka kely
Raha olona sarotra aminao ny matoky olon-kafa amin'ny zavatra tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao, dia tsy afaka mametaka switch fotsiny ianao ary manova izany.
Azonao atao ny manomboka mamerina ny finoana ny olon-kafa raha manomboka kely ianao, ary miezaha tsy hanana fanantenana lehibe.
Omeo fotoana ny olona handray andraikitra kely tsy hanimba tanteraka ny fiainanao raha tsy vita tanteraka toa ny nataonao azy izy ireo.
Asaivo mandro ny zaza / sakaizanao ny namanao ary hampandry azy ireo mandritra ny alina X isan-kerinandro.
Omeo mpiasa ambany toerana iray ny iray amin'ireo lahasao tsy dia lehibe loatra, koa izy ireo izao no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana izany.
Matetika, raha manome kely ny fahafaha-manaitra ny olona isika, ary avy eo miaiky ny fahagagana rehefa mahomby, dia hazoto handray andraikitra bebe kokoa amin'ny ho avy izy ireo… ary hanao tsara ireo koa.
7. Ekeo ny fahatokisan-tena sasany fa tsy azo ihodivirana
Ny olona eo amin'ny fiainantsika dia kilema tahaka antsika, ary azo inoana kokoa fa handratra antsika izy ireo amin'ny fotoana iray.
Mety tsy fanahy iniana ireo ratram-po ireo. Mety ho fanapahan-kevitra ratsy tsy maharitra fotsiny izy ireo.
Fa raha olona manana olana amin'ny fifampitokisana ianao dia mety hanamafy ny zavatra inoanao ratsy izany, satria manana fanantenana tsy ampoizina ianao fa ireo izay tia anao dia tsy handratra anao na hamadika ny fitokisanao velively.
Tsy marina izany. Tsy azo ihodivirana ny ratra kely.
Ho sitrana koa izy ireo.
Io no ilana an'io kaonty 'banky fitokisana' avy amin'ny teboka # 2 io. Rehefa manao zavatra manimba ny fitokisanao ny olona iray dia azonao atao ny mampiditra azy ireo teboka fahatokisana sasany.
Raha kely ny fandikana ny fifampatokisana dia miala kely fotsiny ianao.
Mazava ho azy, raha lehibe izany dia manaisotra fisintonana lehibe kokoa ianao na hanidy ny kaontiny maharitra.
Ary raha matetika ny famadihana, dia mety ho hitanao fa ambany ny kaontiny.
Saingy, amin'ny ankapobeny, mety ho hitanao fa ny olona manao zavatra izay mampitombo ny kaonty fitokisany matetika kokoa noho izy ireo manao zavatra hahazoana sazy.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, mety handratra anao izy ireo, saingy hanitsy ny zava-misy izy ireo.
8. Valio ny tenanao amin'ny fanehoana fitokisana
Ny fanamafisana tsara dia fitaovana matanjaka raha ny fiovan'ny fitondran-tena no resahina. Ary ao anatin'izany ny fomba fisainanao sy ny fihetsikao amin'ny olona iray.
Noho izany, isaky ny mitoky amin'ny olona ianao dia omeo valisoa amin'ny fomba hafa ny tenanao.
Izany dia mety hidika fotsiny amin'ny firarian-tsoa, ​​na dia an-tsaina aza, mitehaka any an-damosina noho ny fanehoana herimpo hatoky olona.
Na mety misy fantsom-pisakafoanana misy gilasy tianao na tapakila mankao amin'ny kaonseritra iray.
Arakaraka ny anaovanao izany dia vao mainka lehibe kokoa ny fiarahana miorina amin'ny fahatokisanao ny olon-kafa.
9. Fantaro rehefa manao sabotage samirery ianao
Tadidinao ireo faminaniana manatanteraka tena noresahintsika teo aloha ireo? Eny, zava-dehibe tokoa ny fahafantaranao rehefa mitranga izany.
Zava-dehibe izany satria raha afaka manapaka ny tsingerina ianao ary manova ny lamin'ny fitondran-tena izay mitarika amin'ny famonoana tena, dia manakana ny ratra aterak'izany ianao.
Ary rehefa io ratra io dia voaforon'ny fahatokisana tapaka, azonao atao ny manamafy ny olan'ny fifampitokisana efa anananao.
Azonao atao ny manatsara ny fifandraisanareo ary mamela ny zavatra tsara hohamafisina fa tsy ny ratsy.
10. Miverina ireo andraikitra
Andao hihevitra isika fa mihetsika amin'ny fomba paranoida sasany voalaza eo am-piandohan'ity lahatsoratra ity.
Angamba ianao mitsikilo ny vadinao.
Raha miova ny anjara asanao, inona no ho tsapanao raha mihetsika toy izany aminao ny namanao?
Mety ve ianao mahatsiaro voafitaka ?
Mety ho sosotra ve ianao noho ny tsy fahatokisan'izy ireo anao raha tsy nanao na inona na inona ianao mba hahazoana ny ahiahin'izy ireo?
Ho tsapanao ve fa tsy nanaja izy ireo ary mifehy ?
Eny, te hisoroka ny tsy handratra anao indray ianao, fa tandremo sao manao izany dia tsy lasa ilay olona nandratra anao.
iraika ambin'ny folo. Amboary ny tombam-bidinao
Talohan'izay dia niresaka momba ny anjara asan'ny fitokisan-tena amin'ny fahaizana matoky olon-kafa isika.
Rehefa tianao ny maha-ianao anao dia tsikaritra kokoa ny fandrahonana ivelany. Ary iray amin'ireo fandrahonana ireo ny famadihana ny fitokisanao.
Raha manana fiheverana tsara ny tenanao ianao, dia mahita antony vitsy kokoa noho ny antony irian'ny olona hafa handratra anao.
Ary na dia mandratra anao aza izy ireo - minia tsy nahy - afaka mandefitra ianao ary tsy mahatsiaro tena ho kapoka mafy amin'ny fihetsik'izy ireo.
Noho izany amin'ny alàlan'ny fiasanao ny fahatokisanao tena dia manampy ianao amin'ny famahana ny olana atokisanao amin'ny fotoana iray.
Afaka manampy anao ve ity fisaintsainana ity? matokia indray ? Heverinay izany.
tononkalo momba ny safidy eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny poety malaza
inona no mitranga rehefa fongotra narcissistic famatsian
maninona ny olona no mieritreritra fa hafahafa
aj style lalao kintana 5